Ninkii ka dambeeyey dilkii Bobby oo xabsiga laga sii daayey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bobby adeerkii oo maxkamadda saaran. Sawirle: Calle Jismark
Ninkii ka dambeeyey dilkii Bobby oo xabsiga laga sii daayey
La daabacay tisdag 27 november 2012 kl 10.16
Adeerkii Bobby, ahaana ninkii la deggenaa hooyada dhashay wiilkaasi ayuu ku dhacay xabsi toban sannadood ah, middaasina oo ay ka dambeeysay tacadi iyo jir-dil uu u geeystay wiilkaasi oo sababay geeridiisii.
Lix sannadood dabadeed ayuu dib u hantay xoriyaddiisii.
Qadarka ku dhacay Bobby ayaa gilgilay bulshada Iswiidhen. Muddo bil ah ayaa wiilkaasi loo geeysanayey tacaddiyo ey ka mid yihiin in koranto lagu qabto, isaga oo qaawan barafka lagu dul seexiyo iyo in jir-dil xooggan loogu geeystay deegaan ku yaala meel ka baxsan Nässjö oo dhacda nawaaxiga Småland, halkaasina oo uu ku geeriyooday. Dabadeed ayey waalidkii dhalay maydkiisii ku qariyeen jasiirad halkaasi ku taala.
Bobby adeerkii iyo hooyadii dhashay ayay maxkamad ku xukuntay sannadkii 2006 xabsi 10 sannadood ah, iyagoona lagu eedeeyey iney ka dambeeyeen geerida wiilkaasi.
Lix-sannadood dabadeed 15-kii bishii oktoobar ayaa oodda laga qaaday iyaga oo helay xoriyad xaddidan, waxa lagu magacaabo "villkorlig dom - oo haddii ay muddadaa dembi hor leh galaan lagu ciqaabayo kii hore iyo dembiga ey galeenba". Hooyada dhashay wiilka dhintay ee Bobby ayaa xabsiga horay uga baxday xilligii kuleeylaha ee ina dhaafay, sida uu qoray war-geeyska Aftonbladet.
- Waa sida uu u qoran yahay xeerka dalka Iswiidhen. Dhammaan cid walba ee lagu rido xukun leh wakhti cayiman waxaa oodda laga qaadaa kolka ay xabsiga ku dhameeysato saddex-meeloodow laba, sida uu hayadda wararka Iswiidhen ee TT u sheegay Jerzy Sarnecki, ahna caalin ku takhasusay culuunta dembiyada.
Hooyada dhashay wiilka iyo ninka ay wada deggenaayeen ayaa maxkamaddu ku soo eedeeysay dil, halka ey iska dheereeyeen oo mid waliba kan kale ku eedeeyay.
- Waxaa la cadeeyn waayey in muhiimmadoodu ahayd inay wiilka qudha ka jaraan, hase yeeshee ay muujiyeen taxadar-darro aad u ballaaran, sida uu sheegay Jerzy Sarnecki.
- Haddii maxkamaddu u aqoonsan lahayd in dilka Bobby ahaa ku-talo-gal, waxaa loo aqoonsan lahaa dil, falkaasina oo hor-seedi lahaa xukun ah xabsi daa'in. Umana aaney suurtagasheen iney muddadan gaaban xabsiga kaga soo baxaan.